အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: May 24, 2010
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Monday, May 24, 2010 Monday, May 24, 2010 Labels: ဆောင်းပါး
တစ်နေ့ညက အင်တာမီလန်နဲ့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်တို့ရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲကို ကြည့်ဖြစ်တော့ ဒီစာလေးကို ရေးချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒ ဖြစ်လာမိပါတယ်.. မိန်းခလေးနဲ့ ဘောလုံးပွဲ ဘာဆိုင်လို့လဲလို့ ပြောလာကြရင် ၀ါသနာ ပါတာကြောင့် ဆိုင်ပါတယ်လို့ ပြန်ဖြေချင်ပါတယ်.. ကျွန်မကိုယ်တိုင်က ဘောလုံးတော့ မကန်တတ်ပေမဲ့ ဘောလုံးပွဲကြည့်ဖို့ကိုတော့ အင်မတန်မှ ၀ါသနာပါပါတယ်… စာဖတ်ရင်တောင် စုံထောက်ဝတ္ထုတို့၊ စွန့်စားခန်းတွေ ပါတဲ့ ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ကောင်းတဲ့ ၀တ္ထုတို့ကို ကြိုက်နှစ်သက်သလို ဘောလုံးပွဲ ဆိုတာကလည်း စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ အကောင်းဆုံး အားကစားနည်း တစ်မျိုးမို့ ပွဲစဉ်တစ်လျှောက်လုံး ရင်တစ်ဖိုဖိုနဲ့ ကြည့်ရတဲ့ ဒီကစားနည်းကို ကျွန်မ နှစ်သက် သဘောကျမိပါတယ်.. ဘောလုံးပွဲဟာ တစ်ခြား ဘယ်အားကစားနည်းနဲ့မှ မတူအောင် သြဇာကြီးတဲ့ ကစားနည်း တစ်မျိုးဆိုရင်လဲ မမှားပါဘူး.. ကျွန်မတို့ ဆရာ တစ်ယောက်က ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်.. ခုခေတ်မှာ စစ်ကို သေနတ်ကိုင်ပြီး မတိုက်ကြတော့ဘူး.. အားကစားနဲ့ပဲ တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ စစ်တိုက်ကြတယ်. အထူသဖြင့် အခြား အားကစားနည်းတွေထက် ဘောလုံးပွဲနိုင်ရင် နိုင်တဲ့ နိုင်ငံက ပိုပြီး ဂုဏ်သိက္ခာတက်တယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်.. ဒါကြောင့်လဲ နိုင်ငံတိုင်းက အားကစားအတွက် ငွေကြေးအကုန်အကျခံပြီး ပြုစုပျိုးထောင်တာ တွေ့ရပါတယ်.. ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံ အပါဝင်ပေါ့နော်.. သိန်းပေါင်းထောင်နဲ့ချီ ရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီး ဘောလုံးကလပ်အသင်းတွေ ထောင်ထားတာ ကြည့်ပါလားနော် :) :)
အနုပညာဆန်လှတဲ့ ဘောလုံးကစားနည်းကို လူတွေက စွဲမက်ကြတာ မဆန်းပါဘူးနော်.. ဘောလုံးဟာ ပွဲကစားနေတဲ့ တစ်နာရီခွဲလုံးလုံး (အချိန်ပိုမပါ) ကြည့်နေစဉ်မှာ မျက်တောင် မခတ်မိအောင် ဆွဲဆောင်အား ကောင်းကောင်းနဲ့ ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ရသကို ပေးနိုင်စွမ်းတာ ဘောလုံးဝါသနာအိုးများ အသိဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. ဘောလုံး ၀ါသနာ မပါသူများအတွက်တော့ မဆိုလိုပါ.. ချန်ပီယံလိဂ် ဖိုင်နယ်ပွဲမှာ အင်တာမီလန် ဖလား ရသွားတော့ အင်တာရဲ့ နည်းပြဖြစ်တဲ့ မော်ရင်ဟိုကို ကြည့်ပြီင်္း သူ့အကြောင်းလေးတွေ တွေးဖြစ်ပါတယ်.. ပေါ်တူဂီသားဖြစ်တဲ့ မော်ရင်ဟိုဟာ တစ်ချိန်က အင်္ဂလန်မြေမှာ နေခဲ့စဉ် ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ နည်းပြအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်ကတည်းက လူမုန်းများသူရယ်လို့ နံမည်ကျော်ကြားပါတယ်.. ဘာကြောင့်ဆိုရင် သူဟာ အပြောကြီးပြီး ဒေါသထွက်လွယ်တဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်တာရယ် သူ့အသင်းကန်နေတဲ့ တစ်လျှောက်လုံး အငြိမ် ထိုင်ကြည့်မနေတတ်ဘဲ ကွင်းဘေးကနေ စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ တစ်ချိန်လုံး အော်ဟစ် ညွှန်ကြား နေတတ်တော့ ထိုင်ခုံလေးပေါ်မှာ စတယ်လေး၊ အိနြေ္ဒလေးနဲ့ထိုင်ပြီး နေတတ်တဲ့ ဂုရုကြီး အာဆင်ဝင်းဂါးတို့၊ ဖာဂူဆန်တို့ထက် စာရင်တော့ သူ့ပုံက လူအမြင် ကတ်ချင်စရာ ကောင်းတာတော့ အမှန်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်.. အထူး သဖြင့် မန်ယူတို့ အာဆင်နယ်တို့ရဲ့ ပရိတ်သတ်အတွက်တော့ မျက်စိနောက်၊ မျက်မုန်းကျိုး ကြတာပါဘဲ.. ကျွန်မကိုယ်တိုင် မန်ယူပရိတ်သတ် ဖြစ်ခဲ့တုန်းက မော်ရင်ဟိုကို အပြောကြီးသူရယ်လို့ ကြည့်မရခဲ့တာ အမှန်ပါ..
ဒါပေမဲ့ ကြာလာလေ သူ့အကျင့်စရိုက်နဲ့ သူ့စိတ်ဓာတ်တွေကို ပိုသိလာရတဲ့အခါ သူ့အပြောကြီးမှုက ခွင့်လွှတ်နိုင်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်.. မော်ရင်ဟိုဟာ အပြောလဲ ကြီးသလို သူပြောတဲ့အတိုင်း လက်တွေ လုပ်ပြနိုင်တဲ့သူလဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ပေါ်တို၊ ချယ်လ်ဆီး၊ အင်တာ စတဲ့ သူကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ အသင်းတိုင်းကို ထိပ်တန်း ဆုဖလားတွေ ရယူနိုင်အောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့တာက ငြင်းမရတဲ့ သူ့အရည်အချင်းတွေရဲ့ သက်သေ ဖြစ်လာပါတယ်.. ဒီတော့မှ လူတစ်ယောက်ကို အပေါ်ယံကြည့်ယုံနဲ့ ထင်မြင်ဆုံးဖြတ်တတ်တာ မှားနိုင်ကြောင်း တွေးမိလာပြီး ကောက်ချက်ချလွဲပြီး ဒီနည်းပြအပေါ် ကြည့်မရခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှားမှန်း သိလာရပါတယ်.. တစ်ချို့သူတွေက စကားများများ ပြောပေမဲ့ အလုပ် နည်းနည်းသာ လုပ်တဲ့အတွက် အောင်မြင်မှုကို မရနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ မော်ရင်ဟိုက စကားလဲ များများပြောတတ်သလို သူပြောသလို ဖြစ်အောင်လဲ လုပ်ပြနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်.. ဒီနှစ်မှာလည်း သူကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ အင်တာမီလန်အသင်းကို ပြည်တွင်းဖလား ၂လုံးနဲ့ အတူ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား စုစုပေါင်း ဖလား ၃ခုကို ရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ.. ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် အပြောကြီးပေမဲ့ အလုပ်နဲ့ သက်သေပြနိုင်တဲ့ မော်ရင်ဟိုကို လေးစားအားကျဖို့ကောင်းတဲ့သူ စာရင်းထဲမှာ ကျွန်မအနေနဲ့ ထည့်သွင်းထားလိုက်မိပါတယ်.. နောက်ဆုံးသတင်းက ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ်အပြီးမှာ မော်ရင်ဟိုဟာ ရီးရဲအသင်းကို မကြာခင်ပြောင်းတော့မယ်လို့ ကြားမိတာပါဘဲ. ဘယ်နေရာဘဲရောက်ရောက် အရည်အချင်းရှိတဲ့ သူ့အနေနဲ့ အကောင်းဆုံး အနေအထားရအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်.. အောင်ပွဲတွေနဲ့ ဝေးနေတဲ့ ရီးရဲအသင်း အတွက်တော့ မော်ရင်ဟိုဟာ မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်တန်းကလေး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ အင်တာမီလန် အသင်းကလည်း ဒီနည်းပြကို လက်လွတ်မခံရအောင်တော့ ကြိုးစားနေတယ် လို့သိရပါတယ်.. ဒါကိုကြည့်ပြီး လူတော်တွေအတွက်တော့ ထိုက်တန်တဲ့နေရာက အမြဲ ရှိနေတယ် ဆိုတာကို အသိတရား ရမိပါတယ်..
ကျွန်မအနေနဲ့ ဘောလုံးပွဲတွေ ကြည့်မိတိုင်း အနိုင်ရ ဗိုလ်စွဲသူတွေက ပျော်နိုင် မော်နိုင်ကြသလို၊ ရှုံးသူတွေရဲ့ ရင်ထဲက ခံစားချက်ကိုလည်း ကိုယ်ချင်းစာမိပြီး သူတို့ကို သနားမိပါတယ်.. အထူးသဖြင့်တော့ ဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်တွေ၊ အဆုံးအဖြတ် ပွဲစဉ်တွေမှာပါ။ ရှုံးနိမ့်သူတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်ဆိုတာ တကယ်တမ်းတော့ ခါးသီးလွန်းလှပါတယ်.. လူတိုင်းဟာ ဘယ်သူမှတော့ အရှုံးကို လိုလားကြမယ် မဟုတ်ပါဘူး.. တစ်ချို့ကစားသမားတွေမှာ အားကစားစိတ်ဓာတ် နည်းတာက ရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာ ဘောလုံးကို အာရုံစိုက်ဖို့ထက် တစ်ဘက်လူ နာကျင်သွားအောင် တမင်ရည်ရွယ်ပြီး လူချတတ်တာကို တွေ့ရပါတယ်.. နောက်တစ်ချက် ဘောလုံးပွဲတွေမှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပကတိ စိတ်ရင်းတွေကို မကြာခန မြင်တွေ့ခွင့်ရတတ်ပါတယ်.. လူတိုင်းဟာ အနိုင်လိုချင်ကြတာပေမဲ့လို့ မသမာသောအနိုင်၊ ဟန်ဆောင် မာယာများပြီး ရတဲ့ အနိုင်မျိုးကတော့ အနုပညာဆန်လှတဲ့ ဘောလုံးကစားနည်းကို ရသပျက်စေတဲ့ အမဲစက်များဘဲ ဖြစ်ပါတယ်.. တစ်ချို့သော ဘောလုံးသမားတွေမှာ ဟန်ဆောင် လိမ်ညာတတ်တဲ့ စရိုက်မျိုးဟာ ဘောလုံး ကန်နေရင်း ဖုံးမရ ဖိမရ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်.. အချို့ကျတော့ ဒေါသကြီးပြီး တစ်ဘက်လူ မနာနာအောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ကြံတတ်တဲ့သူမျိုးပါ… တစ်ဘက်လူ အရှိန်နဲ့ကျွံဝင်လာချိန်မှာ ကိုယ်က ရှောင်ပေးလိုက်ရင်ရရက်နဲ့ မရှောင်ဘဲ တမင်ဝင်တိုးတတ်တဲ့ အကျင့်စရိုက်မျိုး ရှိသူတွေကိုလည်း မကြာခန တွေ့ရတတ်ပါတယ်.. တစ်ချို့ကျ ကိုယ့်ကို တစ်ဘက်လူက မတော်တဆဖြစ်စေ၊ တမင်တကာဖြစ်စေ ထိခိုက်အောင် လာလုပ်ချိန်မှာ ဒေါသကို မထိန်းနိုင်ဘဲ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ပြန်လုပ်တတ်တဲ့ သူမျိုးပါ။ ဘောလုံးကစားတာဟာ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် ကစားရတဲ့နည်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာ လက်ခံပါတယ်.. သို့သော်လည်း တစ်ဘက်လူ မနာမနာအောင် တမင်ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ကြံတဲ့ လုပ်ရပ်များကတော့ ဘောလုံးအလှကို ဖျက်ဆီး ကြသူများ လို့သာ ကျွန်မမြင်မိပါတယ်..
နောက်ထပ် ဘောလုံး အလှ ဘောလုံးရသကို ဖျက်ဆီးသူများကတော့ ဘောလုံးပွဲကို အားပေးနေစဉ်မှာ ဘောလုံး ကစားနေတဲ့ ကွင်းလယ်မှာ အကြောင်း ကြောင်းကြောင့် ပြဿနာ ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ.. ကိုယ်အားပေးနေတဲ့ အသင်းသား တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်သွားသည်ဖြစ်စေ စိတ်ကို မထိန်းနိုင်ကြဘဲ ရေသန့်ဘူးများ၊ လက်ထဲရှိတဲ့ ပစ္စည်းများနဲ့ ပစ်ပေါက်အော်ဟစ်တတ်တဲ့ သူမျိုးပါ.. အထူးသဖြင့် သူတစ်ပါးနိုင်ငံတွေနဲ့ ကစားနေကြတဲ့ နိုင်ငံတကာ ပွဲမျိုးဆိုရင် ပိုပြီး ရှက်စရာ ကောင်းပါတယ်.. နိုင်ငံနဲ့ချီပြီး ဂုဏ်သိက္ခာကျနိုင်တဲ့ လုပ်ရပ်များ ဖြစ်ပြီး အလွန်အင်မတန်မှ ရုပ်ဆိုးလွန်းတယ်လို့ ကျွန်မအနေနဲ့ မြင်မိပါတယ်.. ဒီဖြစ်ရပ်မျိုး ဖြစ်တဲ့အခါ ဘောလုံးပွဲမှာ ကိုယ်တိုင် ရောက်မနေခဲ့ရင်တောင်မှ တီဗီမှာ ထိုင်ကြည့်ရင်း ရှက်နေမိပါတယ်.. ဒါကြောင့် ကိုယ့်လုပ်ရပ်ဟာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်၊ ကိုယ့်ပြည်နယ်၊ ကိုယ့်မြို့နယ်၊ ကိုယ့်ရပ်ရွာ နံမည်ကိုပါ ထိခိုက်မဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးဆိုရင် ဆင်ခြင်သင့်လှပါတယ်.. ဒီလိုပြောလို့ ဘောလုံးပွဲကို ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်လေး ထိုင်ကြည့်တတ်သူလား မေးလာမယ်ဆိုရင် ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း အားပါးတရ အော်ဟစ်အားပေးရတာကို ၀ါသနာပါသလို ဒီလို အားပေးရတာကိုလဲ ပိုနှစ်သက်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကြောင့် သူတစ်ပါးဖြစ်စေ၊ ကိုယ့်ရပ်ရွာဖြစ်စေ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ဖြစ်စေ နစ်နာမဲ့ အနေအထားမျိုးကိုတော့ မနှစ်သက်မိသူပါ။ ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ်အားပေးတဲ့ အသင်းကို လူတိုင်းက နိုင်စေချင်ကြပေမဲ့လို့ ပရိတ်သတ်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်တွေရဲ့ အမှားကြောင့် အနိုင်မရဘဲ အားလုံး နစ်နာသွားနိုင်တာကိုလည်း မြင်ထားသင့်ပါတယ်..
ဒါကြောင့် ဘောလုံးကန်သူရော ဘောလုံးကြည့်သူများပါ ဘောလုံးရသ ဘောလုံးရဲ့ အနုပညာအလှများကို မပျက်စီးစေဘဲ အားကစားစိတ်ဓာတ် အပြည့်နဲ့ ကန်ကြမယ်၊ ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင် ဘောလုံးကစားနည်းဟာ အလှဆုံး၊ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံး၊ လူတွေကို အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးသော ကစားနည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြောရင်းနဲ့ ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရင်း ကျွန်မ မြင်မိတွေးမိတာလေးကို ချရေးမိတာပါ.. ဘောလုံးကစားနည်းတွေကိုတော့ ထဲထဲဝင်ဝင် မသိပေမဲ့ ဘောလုံးကစားနည်းကို နှစ်သက်သူ ၀ါသနာပါသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့သာ ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်.. အမြင်မတူတာများ ရှိခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။ မိန်းခလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ဘောလုံး ကစားနည်း အပေါ် မြင်မိတဲ့အမြင်ဖြစ်တာကြောင့် အားနည်းချက်များ လစ်ဟာချက်များ ရှိခဲ့ရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့ ကြိုတင် တောင်းပန် ထားပါရစေ.. ဒီရာသီမှာ ဖလား၃လုံးနဲ့အတူ ချန်ပီယံဖြစ်သွားတဲ့ အင်တာမီလန်အသင်းနဲ့ နည်းပြ မော်ရင်ဟိုတို့ကို ၀မ်းသာဂုဏ်ယူပါကြောင်းနဲ့ ကျွန်မတို့ မြန်မာအသင်းအနေနဲ့လည်း တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ချန်ပီယံလိဂ်လိုပွဲမျိုး ၀င်ရောက်နိုင်တဲ့ အဆင့်အတန်းမျိုးထိ ဖြစ်လာမယ်လို့ ယုံကြည် မျှော်လင့်ချင်ပါတယ်.. ဒီလိုပွဲမျိုးကိုလည်း တွေ့ချင် လှပါတယ်လေ။ ဒီချိန်ကျရင် ဘောလုံးဝါသနာ ရှင်များနဲ့ ကျွန်မတို့ အားလုံး အတူတူ အားပေးကြဖို့ တစ်ချိန်ချိန်တော့ ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားကြပါစို့နော်..
(မျှော်လင့်ခွင့်တော့ ရှိတယ်မဟုတ်လား :) )
တူတော့ ပိုခဈြရတာပေါ့ …